Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - Activities
[ , , , ] Ny iray amin'ireo fanambarana mampihetsi-po indrindra avy amin'ny Benoit sy ny mpiara-miasa (2016) fikarohana momba ny fametrahana ny famolavolana politika dia ny famoahana ny valiny. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) dia manome fahafahana miditra amin'ny Fikambanana Manifesto. Andramo ny mamelatra ny sary 2 avy amin'i Benoit et al. (2016) mampiasa mpiasa avy amin'ny Amazon Mechanical Turk. Toy izany ihany koa ny vokatrao?
[ ] Ao amin'ny tetikasa InfluenzaNet, misy tontolon'ny mpilatsaka an-tsitrapo iray mitatitra ny fihenjanana, ny fihanaky ny aretina ary ny fitadiavana fahasalamana mifandraika amin'ny gripa toy ny aretina (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Ampitahao sy ampifanoheranao ny endrika, ny vola, ary ny mety ho fahadisoana ao amin'ny InfluenzaNet, ny Google Flu Trends, ary ny rafitra fitsikilovana nentim-paharazana.
Eritrereto ny fotoana tsy voamarina, toy ny fipoahan'ny endrika gripa. Farito ireo fahadisoana mety amin'ny rafitra tsirairay.
[ , , ] Ny gazety Toe-karena dia gazety isan-kerinandro. Mamoròna tetik'asa fanatanterahana ny olombelona mba hahitana raha niova tsikelikely ny tahan'ny vehivavy amin'ny lehilahy eo amin'ny fonony.
Ny gazetiboky dia afaka manana fàfana samihafa any amin'ny faritra valo (Afrika, Azia Pasifika, Eorôpa, Vondrona Eoropeana, Amerika Latina, Afovoany Atsinanana, Amerika Avaratra, ary Fanjakana Anglisy) ary azo alaina avy amin'ny tranokalan'ny gazetiboky izy rehetra. Mifidiana iray amin'ireo faritra ireo ary tanterao ny fanadihadiana. Azonao atao ny mamaritra ny fomba fampiasanao amin'ny antsipirihany mba hahafahan'izy ireo mamerina indray ny hafa.
Ity fanontaniana ity dia nahazo tsindrim-peo avy amin'ny tetikasa mitovy amin'izany nataon'i Justin Tenuto, mpahay siansa momba ny angona ao amin'ny orinasan-tserasera CrowdFlower: jereo ny "Time Magazine Tena Tia Azy" (http://www.crowdflower.com/blog/time-magazine-cover-data) .
[ , , ] Manangana eo amin'ilay fanontaniana teo aloha, izao dia manatanteraka ny fanadihadiana ho an'ireo faritra valo rehetra.
Inona no fahasamihafana hitanao manerana ny faritra?
Ohatrinona ny fotoana sy vola fanampiny noraisina mba hampitomboana ny fandalinanao any amin'ny faritra valo rehetra?
Alaivo sary an-tsaina hoe ny Economist dia manana rakitsary 100 isan-kerinandro. Omano hoe ohatrinona ny fotoana sy vola bebe kokoa horaisina mba hanatsarana ny fandalinanao amin'ny rakitra 100 isan-kerinandro.
[ , ] Misy tranonkala marobe izay manokatra tetikasa antso an-tariby, toy ny Kaggle. Mandraisa anjara amin'ny iray amin'ireto tetikasa ireto, ary mamarino ny zavatra nianaranao momba io tetikasa manokana io ary momba ny antso an-kalalahana amin'ny ankapobeny.
[ ] Jereo ny gazety vao haingana amin'ny saha. Misy ve ny taratasy izay mety ho novolavolaina ho tetikasa antso an-telefaona? Nahoana?
[ ] Purdam (2014) mamaritra ny fanangonana angon-drakitra momba ny fangatahana any Londres. Fintino ny hery sy ny fahalemen'ity fikarohana ity.
[ ] Redundance dia fomba iray manan-danja hanombanana ny kalitaon'ny fanangonana tahiry. Windt and Humphreys (2016) namolavola sy nandramana rafitra iray mba hanangonana ny tatitra momba ny hetsika fifandonana avy amin'ireo olona any Congo Atsinanana. Vakio ilay taratasy.
Ahoana no ahazoana antoka fa ny fanamafisana azy ireo?
Nanolotra fomba maro izy ireo hanamarinana ireo angona nangonina avy amin'ny tetikasany. Fintino azy ireo. Iza no tena nandresy lahatra anao?
Manolotra fomba vaovao ahafahana manaiky ny angona. Ny soso-kevitra dia tokony hiezaka ny hampitombo ny fahatokisanao amin'ny tatitra amin'ny fomba izay mahomby sy mendrika.
[ ] Karim Lakhani sy ireo mpiara-miasa (2013) namorona antso an-telefaona hangatahana algorithm vaovao hamaha ny olana ao amin'ny biôlôjia. Nahazo 600 fanolorana izy ireo ary misy fomba fiasa 89 momba ny informatika. Amin'ireo fanapahan-kevitra, 30 dia nihoatra ny fanatanterahana ny MegaBLAST National Institutes of Health (US National Health), ary ny fanoratana tsara indrindra dia nahatratra marina kokoa sy haingana kokoa (in-1 000 ha haingana).
Vakio ny taratasiny, ary avy eo dia manolotra olana ara-tsosialy izay afaka mampiasa ny karazana fifaninanana mivelatra. Amin'ny ankapobeny, io karazana fifaninanana mivantana io dia mifantoka amin'ny famenoana sy fanatsarana ny fampisehoana ny algorithm misy. Raha tsy azonao atao ny mieritreritra olana toy izany eo amin'ny saha, dia andramo hanazava ny antony.
[ , ] Tetikasa fanatanterahana olona maro no miankina amin'ny mpandray anjara avy amin'ny Amazon Mechanical Turk. Manorata mba ho lasa mpiasa amin'ny Amazon Mechanical Turk. Mandany ora iray miasa any. Ahoana no fiantraikan'izany eo amin'ny eritreritrao momba ny endrika, ny kalitao, ary ny etikan'ny tetikasa fanatanterahana ny olombelona?